Annuaire de Commerce du Zimbabwe
The ZIMBABWE BUSINESS DIRECTORY is a perfect starting point for international exporters, manufacturers, traders and merchants looking to establish direct contacts with their business counterparts in the lucrative Zimbabwen market. The directory lists wholesalers in Zimbabwe, importers in Zimbabwe, retailers in Zimbabwe, business houses in Zimbabwe as well well as agents in Zimbabwe.
The ZIMBABWE BUSINESS DIRECTORY is a must for export-oriented enterprises looking for business partners in the lucrative markets of Zimbabwe - one of the largest trading hubs of North Africa.
There is a great demand for goods and services among importers in Zimbabwe's capital city, Harare. This Directory is a must for export-oriented enterprises looking for business partners in the emerging markets in Africa like Zimbabwe.
This Directory contains the latest and complete information about your potential business partners in several cities across Zimbabwe.
- Listings of Top Companies in Zimbabwe
- Up-to-date database of businesses in Zimbabwe
Over 5,800 listings